Hormuud Salaam Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay xarunta maama ugaaso oo lagu xanaaneeyo Caruur lagasoo kala aruuriyay wadooyinka muqdosho | dayniiile.com
Home WARKII Hormuud Salaam Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay xarunta maama ugaaso oo lagu...
Hormuud Salaam Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay xarunta maama ugaaso oo lagu xanaaneeyo Caruur lagasoo kala aruuriyay wadooyinka muqdosho
Deeqdaan lacageed ayaa hay’adu ugu tala gashay in wax loogu qabto baahiyaha ka jira xarunta oo lagu daryeelo caruurta danyarta ah oo ku taala magaalada Muqdisho.
Gudoomiye Ku xigeenka hay’ada Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi kobac oo ka hadlay munaasabada deeqda lacagta ayaa sheegay in lacagtan loogu talagalay in wax looga qabto xarunta maadaama lagu jiro busha barakeysan ee ramadaan.
Siraad Maxamed Nuur Maamo Ugaaso oo xanaaneesa caruurtan ayaa kaga mahad celisay hay’adda Hormuud Salaam Foundation deeqda lacageed oo ay soo gaarsiisay iaydoo tilmaamtay inay tahay hey’ada kaliya ee soo xasuusata marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan.
Hormuud Salaam Foundation waxaa maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaana ay ka faa’iideysteen dad aad u fara badan, Barnamijka Taakuleynta iyo Afurinta Bisha Ramadaan.
Previous articleMadaxweynaha Ukraine oo shaaciyay tirada ciidamada guud ee dagaalka uga dhimatay
Next articleMaamulka gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay dad loo qabtay dil ka dhacay Beledweyne
Madaxweynaha Galmudug & Xildhibaano kusii jeeda Baydhabo
Bare wax ka dhiga Jaamacad oo loo ganaaxay Salaad uu tukaday